အက်ပဲလ်ဂီတသုံးစွဲသူ ၁၀ သန်း | ငါက Mac ကပါ
၁၀ သန်း Apple Music သုံးစွဲသူ
Jordi Gimenez | | Apple, Apple ကဂီတ
ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်မီဂေးလ်မှဖြစ်နိုင်သည့်အကြောင်းပြောဆိုသော ၂၀၁၅ မကုန်မီရေးသားခဲ့သောဆောင်းပါးကိုကျွန်ုပ်မှတ်မိသည် 20 သန်း ဒီနှစ်အတွက် Apple Music ကို ၀ ယ်ယူသူအရေအတွက်မှာ ၂၀၁၆ အတွက်ဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ်တွင်အက်ပဲလ်၏ streaming ဂီတ ၀ န်ဆောင်မှုသည်တိုးတက်မှုနှင့်အတူတူညီသောနှုန်းဖြင့်ဆက်လက်တိုးတက်နေသည်ကိုမည်သူမျှသံသယမရှိပါ။ အက်ပဲလ်သည်ဤ ၀ န်ဆောင်မှုကိုဘေးဖယ်ထားခြင်းမရှိပဲသုံးစွဲသူများနေရန်အတွက်အပြောင်းအလဲများနှင့်တိုးတက်မှုများကိုဆက်လက်ထည့်သွင်းနေသည်။ ဒီဂီတဝန်ဆောင်မှုနှင့်ယခုဘဏ္Timesာရေး Times သတင်းစာကကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြတယ် အဆိုပါကိန်းဂဏန်းပြီးသားတက်ကြွအသုံးပြုသူ 10 သန်းရောက်ရှိခဲ့ပြီးနှင့်ဝန်ဆောင်မှုကိုစာရင်းပေးသွင်းထားပါတယ်.
၀ န်ဆောင်မှုပြိုင်ဆိုင်မှုကိုသင်တိုက်ရိုက်ကြည့်လျှင်ဤတက်ကြွသောအသုံးပြုသူနံပါတ်များသည်အလွန်ကောင်းသည်။ အက်ပဲလ်ဟာဒီဂီတ ၀ န်ဆောင်မှုနောက်ကျနေပြီးပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုပိုပြီးစဉ်းစားမိပေမဲ့အရှိန်အဟုန်နဲ့အသုံးပြုသူများအပြီးမှာတော့ ခြောက်လတက်ကြွ။ အခြား ၀ န်ဆောင်မှုဖြစ်သော streaming ဂီတ ၀ န်ဆောင်မှုဖြစ်သော Spotify နှင့် (နှိုင်းယှဉ်စရာမလိုဘဲ) နှိုင်းယှဉ်နိုင်ရန်အတွက်သုံးစွဲသူ ၆ သန်းသို့ရောက်ရန် ၆ နှစ်ခန့်ကြာခဲ့သည်။
အက်ပလီကေးရှင်းတွင်တိုးတက်မှုအတွက်နေရာအတော်များများရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် Cupertino ကုမ္ပဏီသည်ဆော့ (ဖ်) ဝဲနှင့်ပါ ၀ င်သည့်အရာများကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ဆက်လက်ပြုလုပ်မည်ကိုသေချာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်ပင်ဖြစ်ပါစေ၊ Apple Music ကိုစာရင်းပေးဖို့နောက်ဆုံးခြေလှမ်းကိုလှမ်းလိုက်ရုံသာမကအခြား ၀ န်ဆောင်မှုများကိုဖြစ်စေ၊ အခြားမည်သည့်အရာကိုမဆိုအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေ၊ အသုံးပြုသူများပို။ ပို ဒါကြောင့်သူတို့က Apple ကနေဒါမကောင်းတဲ့လုပ်နေတာလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple ကထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ » Apple ကဂီတ » ၁၀ သန်း Apple Music သုံးစွဲသူ
ကောင်းပြီ၊ တစ်ခုခုမှားနေပြီဆိုတာကိုငါမသိခင်အထိသူတို့ကငါ့ကိုသုံးကြိမ်တိုင်ဖိအားပေးပြီးသား။ သင် iTunes ရှိ subscription ကိုပိတ်ထားရင်တောင် iPhone မှာအဲဒီလိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်တောင်သူက subscription ကိုတရားဝင်အဖြစ်ပေးလိမ့်မယ်။ သူတို့ကဒီ unified မရှိကြပါဘူး။
ထို့ကြောင့်တစ်စုံတစ် ဦး ကပြောင်းရွှေ့ခြင်းကိုသတိပြုမိပါက၎င်းတို့၏မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များသို့ချက်ချင်းသွားပြီး subscription option ကိုပိတ်လိုက်ပါ။ ကျွန်ုပ်မှားယွင်းသော ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုအတွက်သူတို့သည်ကျွန်ုပ်အားဤအမှားဖြင့်သုံးလပေးခဲ့သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။
ကမာ! ကောင်းပြီ၊ အကယ်၍ အဲဒီလိုဖြစ်ခဲ့ရင်တစ်ယောက်ထက်ပိုအံ့သြစရာကောင်းလိမ့်မယ် ... သတိပေးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ၎င်းတို့ကိုမည်သည့်နည်းနှင့်မဆိုဖြေရှင်းနိုင်မလားဆိုတာ Apple ကိုခေါ်ပြီးသင်၏ပိုက်ဆံ Trotamundo ကိုပြန်အမ်းမည်